Ahoana ny fomba hahitana ny safidin'ny mpamaky ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Ho an'ny olona tsy mampiasa ny safidy IOS Reader, lazao aminao fa ampiasaina izy io mba hahazoana fomba fijery tsotsotra ny pejin-tranonkala izay tsidihinay hanamorana ny famakiana azy.
Miaraka amin'ny fahatongavan'i iOS 7 nanova ny endrika ankapobeny an'ny iPad sy iPhone izy io. Tsy ny endrika ivelany ihany no niova, fa koa ny toerana misy ny fiasa sasany ampiasaintsika isan'andro. Tsy eo amin'ny toerana nisy azy intsony izy ireo izao.
Ohatra iray mazava ny bokotra Reader. Tamin'ny kinova iOS teo aloha dia eo ankavanan'ny baran'ny adiresy ao Safari rehefa sendra pejy iray izay azo vakiana izy. Safidy izay ampiasaiko isan'andro, ka raha vao nanavao ny iOS 7 aho dia nanomboka nitady azy.
Raha te hiditra ao amin'ny Reader, ny sisa nataonao dia ny paompy eo ambanin'ny baran'ny adiresy Safari. Eo am-piandohana no misy azy ankehitriny ny bara adiresy, izy no misolo tena ny bara mitsivalana telo sy ny ampahefatry ny antsasaky ny telo hafa. Izao ilay kisary dia ny Reader.
Ity dia iray amin'ireo fanovana izay misy dikany avy amin'ny fomba fijery famolavolana, tadidio fa talohan'ny bokotra nisy fanamaivanana tamin'ny faran'ny bara adiresy dia nanondro ny Reader aho. Ankehitriny raha tsy misy ny skeumorphism, tsy misy toerana hametrahana litera sasantsasany izay tsy manana fanamaivanana hanasongadinana azy ireo sy hampisaraka azy ireo amin'ny aoriana. Satria fisaka ny famolavolana ny iOS 7 vaovao, dia tsy maintsy namboarina tamin'ny fomba sasany izy ary nahatratra ireo tsipika marindrano efatra ireo.
Tsy haiko raha, ankoatry ny asan'ny Reader, dia hampiasa ilay safidy koa ianao Lisitry ny famakiana, fiasa iray ahafahanao mitahiry pejy web hamaky azy io any aoriana any amin'ny fitaovana iOS rehetra na koa amin'ny Safari for Windows na Mac. Eny, tamin'ny kinova taloha, iOS 6, ny solomaso nanondro ny safidin'ny List List, efa-joro izy io mankany amin'ny oval. Tamin'ny fahatongavan'i iOS 7, ary taorian'ny fahafatesan'i Steve Jobs, 2 andro izao ny andro, mampiseho ilay karazan-solomaso nitafy azy ihany ilay kisary ary nahatonga azy hahafantatra izany.
Tsy azo atao ny mandà ny porofo.
Fanazavana fanampiny - Tsingerintaona faharoa nahafatesan'i Steve Jobs
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana ny fomba hahitana ny safidin'ny mpamaky ao amin'ny iOS 7
Ao amin'ny iPhone aiza ny windows iCloud?
Midira amin'ny varavarankely izay ahitanao ny takelaka misokatra rehetra ary rehefa tonga eo ianao, dia midino. Any no anananao.
Atsofohy amin'ny iOS 7 ka hatramin'ny iOS 6.1.3 amin'ny iPhone 4 mampiasa iFaith
Te hahafantatra ve ianao hoe iza no mifanitsy amin'ny feon'i Siri?